တရားဒေသနာ – Full Gospel Assembly
Sermons CategoriesEnglish Service (2)Myanmar Service (3)Zomi Service (1)
Sermons SpeakersApostle Ron Sawka (1)Rev Dr Dam Suan Mung (3)Rev. Khin San Nwe (1)Rev. Niang Lamh Kim (1)
Posted on July 4, 2020 | Pastor: Apostle Ron Sawka
GOD’S MIGHTY HAND PROTECTION
Posted on July 2, 2020 | Pastor: Rev Dr Dam Suan Mung
Ih Pasian Lianzaw
Posted on July 2, 2020 | Pastor: Rev. Niang Lamh Kim
Laisiangtho – Late 118-13-13 Ih Pasian lianzaw ih cih ciang na khat peuh khat tawh ih teh nop na hi lo in, tu lai tak bang natna, gentheih na, buainaatuam tuam te om thei aa, khat vei vei ki dam lo thei aa, tua ih dam loh na, lung kham na te pen […]
Posted on July 1, 2020 | Pastor: Rev. Khin San Nwe
အခြေပြုကျမ်း။ ဧဖက်သြဝါဒစာ – ၂း၁။ မိုးကောင်ကင်နှင့်ဘုရားသခင်မြေကြီးအကွာရှိသကဲ့သို့ လူသားနှင့်ဘုရား လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်းဟာ အင်မတန်မှ ကွာခြားပါတယ်။ကနဦးက လူတွေအတွက်ဘုရားရှင်ကြံစည်ထားတွေဟာ အင်မတန်မှကောင်းမွန်ပြီလှပနေတာဖြစ်တယ်။ သူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အာဒံ၊ သူကိုယ်တိုင်ဇီဝအသက်ကို ထည့်ပေးထားတဲ့ အာဒံအတွက် အရာအားလုံးဖန်ဆင်းထားပြီး သူ့အတွက်ရွေးချယ်စရာအများကြီးထားခဲ့ပြီး ထိုအထဲက ဘုရားရှင်တောင်းဆိုတာက တစ်ခုထဲဖြစ်တယ်။ ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုမစားနဲ့၊ စားတဲ့နေ့မှာသေမယ်ဟူ၍ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းမြတ်ခြင်းအများကြီးပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကြားက ဘုရားပိညတ်ချက်ကို ပမာမခန့် စကားနားမထောင်တဲ့နေ့ကစပြီးလူအာဒံဟာ ကျဆုံးရတာဖြစ်တယ်။ မလှပနိုင်တော့ဘူး။ ဒုစရိုက်ရဲ့အဖ၊ မုသာဝါဒရဲ့အဖစာတန်နှင့်ပေါင်းပါသွားရပြီး မြေကြီးတပြင်က လုပ်ဆောင်သမျှအားလုံးဟာ အမင်္ဂလာဖြစ်နေတယ်။ ဘုရားသခင်က ချက်ခြင်းပဲ လူကိုငါပြန်ရွေးနှုတ်မယ်။ မိန်းမအားဖြင့်လူကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်၊ ရှင်မဿဲထဲမှာ အပျိုကညာဖြစ်သူ မယ်တော်မာရိရဲ့ဝမ်းကနေသန္ဓသည်ပြီး ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ရှေးမဆွကတည်းကဤသို့ကြံစည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ လူဟာဘုရားနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပေမယ့် ဘုရားက သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသားတော်ယေရှုခရစ်ကို ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဧဖက် ၂း၇-၈ မှာအကြောင်းမူကား၊ ထိုသခင်အားဖြင့် ငါတို့၌ ကျေးဇူးပြု၍၊ […]
Posted on June 28, 2020 | Pastor: Rev Dr Dam Suan Mung
ခုလိုခက်ခဲတဲ့ အချိန်ကာလမှာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာရင် အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ခုချိန်လိုမျိုးမှာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့၊ သီးခံကြဖို့နှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မေတ္တာတရားပွားများဖို့အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။ ထို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မျှော်လင့်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဟေဗြဲ ၁၁း၆ မှာ ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင် ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ ရေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားအမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရပါမည်။ ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ကို ကြိုးစားရှာသောသူကို တကယ်အကျိုးပေးသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတော ဣသရေလလူမျိူးတွေဟာ အဲဂုတုပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖိနှပ်မှုခံရပြီးမောရှေဦးဆောင်ပြီး ဣသရေလလူမျိူးတွေကျွန်ဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့လုပ်ဆောင်မည့်အချိန်မှာ ဖာရောဘုရင်စိတ်နှလုံးခိုင်မာနေခဲ့ပါတယ်။ နိမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးပြခဲ့ပေမယ့် ဖာရောဘုရင် စိတ်နှလုံးခိုင်မာလျက်ရှိတာကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ အိမ်တိုင်းတံခါးဝမှာ သိုးသူငယ်ရဲ့အသွေးကို သုတ်ခိုင်းပြီး ထိုသွေးကို မြင်တာနဲ့ ကောင်းကင်တမန်တွေကသားဦးကိုသတ်မယ့် ကောင်းကင်တမန်တွေက ကျော်သွားပါတယ်။ ထိုအသွေးကိုတံခါးဘောင်မှာမဟုတ်ထားတဲ့ အဲဂုတ်တုလူမျိုးများဟာ သားဉီးအသတ်ခံရတာဖြစ်ပြီး တချိန်တည်းမှာပဲ ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာ သိုးသူငယ်ရဲ့အသားကို ကင်ပြီး မိသားစုအားလုံးစားရပါတယ်။ အဲဒါကို ပဿခါပွဲလို့ခေါ်ပြီး ဣသရေလလူမျိုးတွေက နှစ်တိုင်းဒီပွဲကျင်းပရတာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်က ရန်သူများအပ်နှံရမယ့်နောက်ဆုံးညမှာ တပည့်တော်များနှင့်အတူ ပသခါပွဲကိုပြင်ဆင်ကြတာဖြစ်ပြီး ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန့်ကားငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏။ ယူ၍ စားကြလော့ဟု မိန့်တော်မူလျက်၊ တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏။ (Mat 26:26)ခွက်ကိုလည်းယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ သူတို့အားပေးတော်မူ၍၊ သင်တို့ရှိသမျှသည်သောက်ကြလော့။ (Mat 26:27)ဤခွက်ကားပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍ လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းငှါ သွန်းသော ငါ၏အသွေးဖြစ်၏။ (Mat 26:28) […]
© 2020 Full Gospel Assembly. All Rights Reserved